Budata Block Havoc APK maka Android
Budata Block Havoc
Budata Block Havoc,
Block Havoc bụ otu nime egwuregwu ekwentị kacha mma enwere ike ịme noge echere, ebe oge anaghị agafe. Nime egwuregwu ahụ, nke dị ka a na-eme ya ka a na-akpọkarị na ekwentị Android, anyị na-agbalị ime ka ihe mgbochi na-abịa site nakụkụ dị iche iche site niji njikwa bọọlụ abụọ nke ga-atụgharị notu oge.
Mgbe mbụ anyị malitere egwuregwu ahụ, nke chọrọ itinye uche, nkà na ndidi, a na-egosi anyị otu esi ejikwa bọọlụ na ihe anyị kwesịrị ime iji wụpụ ọkwa. Mgbe emechara akụkụ ọzụzụ, anyị na-aga nihu na egwuregwu bụ isi. Anyị nwere ike ime ngwa ngwa dodge blocks na-abịa na mbụ nihi na ha ji nwayọọ nwayọọ na-abịa na ọnụ ọgụgụ dị nta. Ozugbo anyị kwuru na egwuregwu ahụ dị nnọọ mfe, ọnụ ọgụgụ nke ngọngọ na-amalite ịba ụba, anyị na-enwekwa mgbagwoju anya ebe anyị ga-atụgharị bọọlụ abụọ ahụ. Egwuregwu ahụ siri ike nezie. Nke ka njọ, ị nweghị ohere ịhazi ọkwa isi ike.
Block Havoc Ụdịdị
Mmepụta: Dodo Built